Monday May 21, 2018 - 16:01:32 in Wararka by Super Admin
Hey'adda samafalka ee Hormuud Foundation ayaa Raashin iyo lacago caddaan ah waxay ay gaarsiisay Isbitaalada Danta guud (Dowliga ah) ee ku yaala Magaalada Muqdisho.
Hormuud Foundation ayaa Isbitaalka Hooyada iyo Dallaanka ee Banaadir gaarsiisay deeqo isugu jirto Shidaal iyo Raashin taasoo lagu wareejiyey Maamulka Isbitaalka.
Sidoo kale Hormuud Foundation ayaa deeqo lacageed gaarsiisay Isbitaallada Madiino, Dayniile, Keysaney iyo Laasareeti waxaana bukaan kasta oo Isbitaaladaas ku jiro la siiyey lacag dhan $100 (Boqol Dollar) sida uu saxaafadda u xaqiijiyey Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa Hormuud Foundation.
” Sida aad ka arkeysaan gadaasheeda, waxaan Isbitaalka Banaadir soo gaarsiinay raashin isugu jiro Bariis, Bur, Sonkor, Saliid, Caleen Shaah iyo Timir, sidoo kale waxaan soo gaarsiinay Shidaal booyad ah” ayuu yiri Cabdullaahi Nuur Cismaan.
Sidoo kale Cabdullaahi Nuur ayaa ka dhawaajiyey in Isbitaalada kala ah Madiino, Dayniile, Keysaney iyo Laasareeti la gaarsiisay gargaar lacageed.
” Waxaan dhammaan bukaanada ku jiro Isbitaaladaan Alle uga baryayaa inuu Caafiyo isla markaasna uu u barakeeyo deeqda aan soo gaarsiinay, waxaana Madaxda Isbitaalada ka rajeeneynaa inay sii laba jibaaraan adeegga ay Bulshada u hayaan” ayuu sii raaciyey Cabdullaahi Nuur.
Agaasimaha Isbitaalada Madiino Dr. Maxamed Yuusuf ayaa ka mahad celiyey deeqdaan la gaarsiiyey Bukaannada ku jira Isbitaalka wuxuuna yiri;
” Hormuud waligeed ay sameyn jirtay sidaan, abaal weyna waan u heynaa, Jazaakal Allah, waan idinka guddoonay, mar kasta ayey caawisaa dadka dhibaateysan ee isbitaalada ku jira weliba marka lagu jiro xaaladahaan oo kale” .
Deeqdaan ay Hormuud gaarsiisay Isbitaalada Danta Guud ee Magaalada Muqdisho ku yaal ayaa kusoo aadeyso xilli ay asbuucii hore deeq isugu jirta Raashin iyo xoolo nool ay gaarsiisay Xabsiga dhexe iyo isbitaalka Martiini oo ay ku jiraan Naafada ciidamada Xoogga ee dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya.
Shirkadda Hormuud ayaa Shacabka Soomaaliyeed mar kasta garab taagan, waxayna kala qeyb qaadataa xaalad kasta oo soo kororto, waxayna aheyd maalmo ka hor markii ay 100 Kun oo Dollar ay ugu deeqday dadka ay dhibaatada kasoo gaartay fatahaadaha Magaalada Beled Weyne.